I-Qinti B&B: I-SUITE EPHAKATHI 402 - I-Airbnb
I-Qinti B&B: I-SUITE EPHAKATHI 402
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAdriana
Igumbi lokulala elinye elihle elinegumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi elincinci. Ihonjiswe kakuhle kwaye itofotofo kakhulu, phambi kwepaki, enendawo yokungena eyahlukileyo. Isemgangathweni wesine kwisakhiwo.
Sinayo yonke into oyidingayo xa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane nelide. Ikhitshi elincinci elenziwe kakuhle elinekhitshi, ibhari ebandayo, i-microwave, igumbi lokuhlamba iimpahla, iketile yombane nazo zonke izinto ezifunekayo ekhitshini. Sinikezela ngenkonzo yasimahla ye-Nerflix ne-Wiffi ngexesha lokuhlala kwakho.
4.91 · Izimvo eziyi-138
I-San Borja, indawo ethe cwaka nehlala abantu. Isondele kakhulu kwisikhululo sikaloliwe sase-Angamos kwaye kufutshane namaziko okuthenga afana ne-Real Plaza de Angamos. Indawo ephambi kwe-Neoplastic Hospital. Imizuzu eyi-15 ukusuka eMiraflores, imizuzu eyi-10 ukusuka eJavier Prado Avenue nemizuzu eyi-5 ukusuka eChacarilla.
Ifumaneka lonke ixesha kwiimfuno zeendwendwe, indlu yethu ikwisakhiwo esifanayo, kwaye siyafumaneka ukuba unemibuzo okanye izinto ezifunekayo